China anyanwụ n'èzí ubi ìhè ụzọ stake iko igwe anaghị agba nchara LED waterproof patio yad ìhè emepụta na suppliers | Kasem
anyanwụ n'èzí ogige ìhè ụzọ stake iko igwe anaghị agba nchara LED waterproof patio yad ìhè
Voltaji ntinye (V): 2V
oriọna na-egbuke egbuke Flux (lm): 200lm
Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃): 10 - 55
Oge ndụ ọrụ: 20000
Ihe eji arụ oriọna: igwe anaghị agba nchara
Nọmba nlereanya: KADC-03
Aha ngwaahịa: oriọna ala (Garden Light)
Nabata ihie kristal:Ogige iko anyị na-enye ọkụ maka ego karịa oriọna plastik. Glass dị mma n'ịfesa ọkụ ruo oke, dị ka kristal na-edo anya ma na-egbuke egbuke. Ihe ịchọ mma nke anyanwụ na-enwu n'èzí na-emepụta ụkpụrụ mara mma doro anya karị, na-agbakwụnye mmecha njedebe na patio patio gị. Glamour anaghị ewepụ abalị! Ndo plastik na-adịkarị mfe ịgbawa na ibelata ọkụ ọkụ na ogologo oge n'ihi oke ihu igwe. Tinye ego karịa, na-enwu ogologo oge, Yard na-adọrọ mmasị karị!
ỌHỤKWU KA EKWU, NDỤ BATI GA-AKWUO:Nchapụta ọkụ SMD bụ 10 lumens, na-egbuke egbuke karịa ọkụ anyanwụ n'èzí. Ụzọ anyị na-enwu ọkụ ịchọ mma na-eme ka ubi gị dị ọkụ ruo awa 10-12 mgbe ịchachara nke ọma 6-8 awa. Igwe mbara igwe buru ibu na ọnụego ntụgharị anyanwụ dị elu na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-agbaji batrị ngwa ngwa. Batrị 600mAh nwere ike ịchaji dị elu na-eme ka ìhè dị ogologo oge. Usoro njikwa ọgụgụ isi na-echebe batrị site n'ịfefe n'elu na ịwụfu ya ka enwere ike iji batrị ogologo oge.
GLASS na igwe anaghị agba nchara & Atụla egwu ihu igwe dị oke egwu:Ekele maka igwe anaghị agba nchara, iko adịchaghị na mmiri IP65, ọkụ ịnya ụgbọ ala na-enye ọkụ n'èzí na-eguzogide ụdị ihu igwe ọ bụla maka iji mpụta ọtụtụ oge. Enweghị nchekasị maka mmiri ozuzo, snow, ntu oyi ma ọ bụ oke okpomọkụ. Mkpuchi mgbochi nchara igwe anaghị agba nchara dị irè n'igbochi mbuze mmeghari. Tụnyere ndị ọzọ, spikes ala anyị kwalitere site na plastik ABS nwere ụdị imewe ọhụrụ, na-enye nkwụsi ike na ike dị mma.
Nwụnye na akpaghị aka / gbanyụọ:Enwere nsogbu waya mgbe ị na-etinye ọkụ n'okporo ụzọ? Ị ga-anwale ọkụ a na-aga n'ihu na anyanwụ! Wụnye ha n'ime nkeji ole na ole site n'itinye stakes n'ime ala wee nweta mgbanwe na ebe ị na-etinye ha. Ha na-agbanye ozugbo n'abalị wee gbanyụọ n'isi ụtụtụ site n'iji nlezianya mee ka ìhè dị gburugburu. Ndụmọdụ: Jide n'aka na ọ dịghị ihe ga-ekpuchi ọkụ ala anyanwụ gị wee kpughee ha na anyanwụ zuru oke maka awa 14 tupu ịmalite nrụnye.
100% ndị ahịa ekwere nkwa:Ejila batrị emebiela. Anyị na-enye ọrụ ndị ahịa 1-na-1 yana akwụkwọ ikike ọnwa 18, yabụ ajụjụ ọ bụla gbasara mbara ala anyanwụ na-egbochi mmiri. Biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Ndụmọdụ: Ọtụtụ ọkụ ọkụ anyanwụ kwadoro na-ewe nkezi nke awa 8 iji chaja nke ọma, yabụ na ị gaghị enwe ike iji ọkụ gị ụbọchị ole na ole ma ọ bụrụ na ị na-agafe ụbọchị ọchịchịrị. na ihu igwe ọjọọ.
Ụdị onyinyo mara mma
Nhazi pụrụ iche, kwe ka ìhè kpuchie oghere ahụ, na-ekepụta ụkpụrụ onyinyo mara mma na usoro ahụ.
Ihu igwe na-eguzogide
Ihe mgbochi mmiri IP 44, kwesịrị ekwesị maka iji ya eme ihe n'èzí, enweghị nchegbu banyere mmiri ozuzo, snowing, oyi. Emere ya siri ike ma mechie ya nke ọma.
Kwadoro site na ike anyanwụ, panel anyanwụ na-anakọta ìhè anyanwụ kpọmkwem na nke zuru oke n'ụbọchị iji chaji batrị, ọkụ nwere ike ịdịru awa 8 ma ọ bụ karịa n'abalị.
Gịnị mere ị na-ahọrọ mirror reflector?
Igwe ọkụ na-acha ọkụ n'èzí, ìhè anyanwụ na-egbuke egbuke na akpaaka na-agbanyụ / gbanyụọ ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpuchi mmiri, igwe anaghị agba nchara LED ihu ọkụ maka yard
* Size & nchara nnukwu iko / igwe anaghị agba nchara: ogige anyanwụ ụzọ ọkụ tụrụ 16.54 "n'ịdị elu x 4.72" na dayameta.
* Ikuku anyanwụ Pathway Light na akpaaka ihe mmetụta nke igwe anaghị agba nchara nwere watertight diamond iko ìhè ndò na-enyere gị aka iji a na-egbuke egbuke anyanwụ n'ogige ìhè n'èzí inogide. Ọdịmma textured nke oge a nke ọla na iko iko nke ike anyanwụ a na-aga ije ọkụ maka ogige patio lawn na azụ azụ dị mma karịa ọkụ ụzọ anyanwụ ka ejiri plastik mee.
Nke gara aga: ogige anyanwụ oriọna obere anyanwụ ike oriọna anyanwụ kwadoro ala ọkụ n'èzí anyanwụ edu ìhè waterproof
Osote: Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ 8 Igwe ọkụ ọkụ nke anyanwụ na-egbochi mmiri n'èzí ọkụ diski anyanwụ maka Pathway Yard Walkway Patio Lawn Path
Ihe mmetụta radar enweghị mmiri IP65 30W 60W 90W 120W ...
N'èzí Ime ụlọ Mpụga Wall Sconces Ìhè Mmiri...
ogige anyanwụ oriọna obere anyanwụ ike oriọna sol...